Milina 2 sifotra vita amin'ny vifotsy pensilihazo fanaovana milina, Shina mandeha ho azy 2 tin dia afaka makarakara pensilihazo mpanao milina mpanamboatra, mpamatsy, orinasa - G STAR TRADING LIMITED
Home>Milina fanamboarana vifotsy
Milina 2 sifotra tin ho an'ny milina fanaovana pensilihazo
Model Number: TM0001
Fepetra takiana minitra: 1 Set
Ora nanomezana: Manodidina ny 45days
Supply Fahaiza-: 1000sets isam-bolana
Mety amin'ny famokarana kapoaka roa
● Ny isan'ny tobim-piantsonana dia azo faritana arakaraka ny filan'ny mpanjifa, ary hatrany amin'ny tobim-piantsenana enina dia azo asiana tombo-kase miampy enti-miasa mba hampihenana ny vidin'ny mpiasa sy hahatratrarana ny fiasan'ny avo lenta.
● Izy io dia mandray ny rafitra fanaraha-maso japoney nafarana avy any ivelany sy ny maotera servo Mitsubishi.
● Ny efijery mikasika dia interface interface sinoa, mora ampiasaina, mora debug, ary ny motera servo dia ampiasaina ho fitaovana fampandehanana pusher, ary marina ny sakafo:
● Ny fitaovana dia manana fitaovana fiarovana sensor fotolectric sy rafitra fanairana. Raha hita fa tsy tomombana ny fitaovana dia hijanona izy ary haneno fanairana ary hampiseho ny toerana misy ny lesoka eo amin'ny efijery mikasika.
● Ireo fitaovana dia manana rafitra fanosotra mandeha ho azy mba hiantohana ny fiasa maharitra ireo fitaovana.
● Araka ny fitsipiky ny mekanika totohondry dia mitombo ny herin'ny totohondry fitaovana.
● Araka ny fitsipiky ny fikorontanan'ny teboka haingam-pandeha dia nohatsaraina ny faharetana sy ny fitomboan'ireo totohondry ambony sy ambany.
● Ny totohondry ambony sy ambany dia natao miaraka amin'ny lavaka famonoana maty misy toerana telo. Raha ny firafitry ny vokatra dia azo fidina ny totohondry maty tokana na famonoana olona roa maty
Fahaiza-mamokatra bobongolo tokana tokana 20pcs / min-50pcs / min
Fahaizana famokarana bobongolo avo roa heny 40pcs / min-100pcs / min
Famahanana motera servo 600W
Ny fanaraha-maso PLC FXIN60MT
Machine habe 4000X655X1850mm
Gross lanja 4000kgs
Ny milina fantsom-bozaka 2 fantsom-bozaka azo ampiasaina ho azy dia afaka manamboatra boaty volo boribory miisa 2 boribory vita amin'ny pensilihazo volo-dite, fitoeran-tsakafo dite. Mamelona azy ho azy ary mamorona endrika tin izay tianao. Izy io dia afaka manamboatra habe amin'ny boaty firapotsy isan-karazany amin'ny alàlan'ny fanovana ny maty. Izy io dia afaka mamonjy asa sy tsy dia mihinana herinaratra.